जर्नादनको रणनीति:अनन्तलाई रोकेर बादललाई गृहमा पठाउन लविङ
काठमाडौं । एमाले–माओवादीबीच गृहमन्त्रालय माओवादीलाई दिने समझदारी जुटेसँगै गृहमा माओवादीभित्रै लफडा चलेको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका विश्वासपात्र तथा प्रभावशाली नेताहरूले नै गृहमन्त्रीको दाबी न ...
ठाकुर–महतोको यो कस्तो मिलन ? अग्रहरीको सांसद पद धरापमा
काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फ क्लष्टर मिचेर अमृता अग्रहरीलाई सांसद बनाएको खुलासा भएको छ । अग्रहरी मधेस मूलकी महिला हुन् । तर, उनलाई राजपाका अध्यक्ष महन्थ ठाक ...
काठमाडौं । वाम गठबन्धन भत्काउन देशी–विदेशी शक्ति लागेका छन् भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दुई दिनभित्र एमालेसँग पार्टी एकीकरण ...
देउवाको विकल्प खोज्दै शशांक
चितवन । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री शशांक कोइरालाले संसदीय दलको नेतामा शेरबहादुर देउवाको विकल्प खोजिने बताएका छन् । एमाले र माओवादीबीच एकता हुनु खुसीको कुरा भएको बताउँदै कांग्रेसलाई जोगाउन पनि आफूहरु ...
सरकारले गरेको सिफारिस असंवैधानिक : कांग्रेस
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको सिफारिस असंवैधानिक भएको जनाएको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रियसभाका तीन सदस्यमा आफ्नो सरकारले पठाएको नाम फ ...
पार्टी एकीकरणसँगै नेकपालाई विप्लव माओवादीको चेतावनी
काठमाडौं । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको पार्टी एकता अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सोमबार साँझ भएको सहमति अनुसार दुई पार्टी एक हुने र नाम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) राखिने छ । तर, आज नेपाल बन्दको घोष ...
काग्रेस संसदीय दलका नेतामा राजीव कोइराला निर्विरोध
विराटगर । नेपाली कांग्रेस प्रदेश १ को संसदीय दलको नेतामा राजीव कोइराला निविरोध निर्वाचित भएका छन् । संसदीय दलको सोमबार बसेको बैठकले कोइरालालाई सर्वसम्मत रुपमा दलको नेता चयन गरेको हो । दुई आका‌ंक् ...
एमाले–माओवादी पार्टी एकताको संभावना कति ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच पार्टी एकता गर्ने सहमति जुटेको छ । दुई नेताबीच भएको सहमति अनुमोदन ...
ओलीले पाखण्डी र दमनकारी चरित्र अंगालेको विप्लवको आरोप , कडा संघर्षमा उत्रने चेतावनी
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले केपी ओलीको सरकारले जनतामाथि दमनको नीति अपनाएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ । प्रहरीले दिउसो विराटनगरमा पार्टी स्थायी समिति सदस्य हेमन्त प्रकाश ओली सुदर्शन, पोलिटब्य ...
विप्लव माओवादीका ३५ भन्दा बढि नेता तथा कार्यकर्ता पक्राउ
विराटनगर । मोरङको विभिन्न स्थानबाट नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका दुई केन्द्रीय नेतासहित ३५ भन्दा बढी नेता कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन् ।पार्टीको भातृ संगठन राष्ट्रिय युवा ...
दाहाल संसदीय दलको नेतामा सर्वसम्मत्
काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संसदीय दलको नेतामा चयन भएका छन् । आइतबार बिहान सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकले अध्यक्ष दाहाललाई सर्वसम्मत रुपमा दलको नेता ...
काठमाडौं । वाम गठबन्धनभित्र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवारका बारेमा अनौपचारिक छलफल सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी एकता ...
चुनाव घोषणापछि देउवाले गरेका अवैधानिक निर्णय खारेज हुने
काठमाडौं । निर्वाचन घोषणायता शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेका नियुक्ति, दूरगामी महत्वका सबै निर्णय मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट खारेजका लागि प्रस्ताव गरेको छ। त्यस्तै, मुलुकको अर्थतन्त्रले ध ...
पार्टी एकताको टुंगो नलागेसम्म ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी नहुने माओवादीको अडान
काठमाडौँ । एमालेसँग पार्टी एकताको विधि औपचारिक रूपमै टुंगो नलागेसम्म माओवादी केन्द्र केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी नहुने अडानमा देखिएको छ । बुधबार राति अबेरसम्म चलेको दुई दलबीचको छलफलमा सहमति जुट ...
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली समूहको पेलानमा परेको माधवकुमार नेपाल समूहले आकस्मिक रुपमा गुटको भेला बोलाएर असन्तुष्टि पोखेको छ । काठमाडौंमा मंगलबार राति आकस्मिक रुपमा बसेको नेप ...
काठमाडौं । माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमको दवावपछि पार्टी एकीकरणको पक्षमा देखिएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई आफ्नै गुटबाट असहयोग भएको छ । माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकीकरण गरेर एकलौ ...
पार्टी एकिकरण नहुँदै एमालेले गर्‍यो ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय
काठमाडौं । नेकपा एमालेको स्थायी कमिटीको बैठकले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको बैठकले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रुपमा अघि ...
पार्टी एकताका लागि प्रचण्डलाई सहमतिको जिम्मा
ललितपुर । नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टी एकता सम्बन्धी समझदारीलाई लिखित रुपमा टुंग्याउने जिम्मा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई दिएको छ । अध्यक्ष प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग ...
ढिलोचाँडो आफू प्रधानमन्त्री बन्ने प्रचण्डको दाबी, पद बाँडफाँडमा चाडै नै सहमति
चितवन। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले पार्टी एकताको विषय बुधबारसम्ममा टुङ्गो लाग्ने दाबी गरेका छन् । प्रचण्डले पद बाँडफाँडका विषयमा पनि भोलिसम्ममा टुङ्गो लाग्ने विश्वास व् ...
अध्यक्षकै हैसियतमा ओली प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता शेरधन राईले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अध्यक्षकै हैसियतमा प्रधानमन्त्री बन्ने दावी गरेका छन् । राजधानीमा आज आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै राईले एमाले र माओवादी केन्द्रवीच ...
एमालेको वेठकमा ओलीको चर्को आलोचना,गुटमा मात्र रमाएको आरोप
काठमाडौं । ‘पार्टी जीवनमा तपाईको जति योगदान छ, त्यति मेरो पनि छ । तपाई अहिले अध्यक्ष हुनुहुन्छ म उपाध्यक्ष छु । तर, तपाई अध्यक्षको हैसियतमा पार्टी चलाउँदै हुनुहुन्न । गुट चलाईरहनु भएको छ । गुटम ...
प्रचण्डले फड्को हान्छु भन्दा खाल्डोमा पर्न सक्ने भन्दै योगेशले दिए चेतावनी
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले बोलेको पछिल्लो अभिव्यक्तिप्रती एमाले नेता योगेश भट्टराई कडा आपत्ति जनाएका छन् । एमाले नेता योगेश भट्टराईले झस्क ...
वाम सरकार छाडेर कांग्रेसको सहयोगमा प्रधानमन्त्री हुँदा धेरैलाई भ्रम भयो : प्रचण्ड
२०७४ माघ २७ गते
चितवन । नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले देशको हितको लागि आफुले अर्को फड्को हान्न बेरै नलाग्ने वताएका छन् । चितवनमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले भने, ‘ प्रचण्ड भनेकै त् ...
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पदबाट राजीनामा नदिने भएका छन् । आफैंले प्रतिनिधिसभा, रासष्ट्रयसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरेर नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि स्वतः कामचलाउ हुने भएकाले राजीनामा दि ...
काठमाडौं । प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा लज्जाजनक हार बेहोरेको नेपाली कांग्रेस भित्रको कलह झन बढ्दो छ । पराजयको कारण खोज्न र समिक्षा गर्नको लागि पार्टीको सबैभन्दा उपल्लो निकाय केन्द्रीय कार्य समिति बैठक बो ...
चुनाव हारे पनि आराजुलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनयन गर्ने तयारी
काठमाडौं। चुनाव हारे पनि पत्नी आरजु देउवालाई प्रधानमन्त्री तथा नेपाली क‌ांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय सभामा मनोनयन गर्ने भएका छन् । त्यस्तै देउवाले चुनाव ...
कसैलाई दोष लगाउनु भन्दा पहिला प्रमाण चाहिन्छ : प्रधानन्यायाधीश पराजुली
काठमाडौँ। प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले कसैको चरित्र हत्या गर्नका लागि विशृंखल र निकृष्ट शब्दको चयन गरेर स्थापित भएकाहरु पनि छिट्टै विस्थापित हुने वताएका छन् । प्रा डा युवराज संग्र ...
बस्नेतको पहलमा कोटेश्वर–जडीबुटी र भक्तपुर–काभ्रेपलाञ्चोक सुरुङमार्ग बन्ने
भक्तपुर । दैनिक रुपमा बढ्दो सडक जाम कम गर्न भक्तपुर र काभ्रेपलाञ्चोकका मुख्य नाकामा सुरुङ मार्ग निर्माण गरिने भएको छ । प्रतिनिधिसभामा नवनिर्वाचित सदस्य महेश बस्नेतको पहलमा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिस ...
कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरु देश दौडाहामा
तेह्रथुम । चुनावमा अप्रत्यासित नतिजा भोग्नुपरेको भन्दै नेपाली कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरुले पार्टी सुदृढीकरणका लागि जिल्ला दौडाहा सुरु गरेका छन् । जिल्ला सभापतिहरूले पार्टी नेतृत्वको चरम लापरबाही बढ्दै ...
अनिवार्य उपस्थित हुन निर्देशन
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आगामी बुधबार हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा अनिवार्य उपस्थित हुन कांग्रेसको तर्फबाट प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाका ...
मर्यादापालकलाई नै दौरासुरुवाल लगाउन दिएनन् नेताहरूले, अान्दाेलनमा उत्रिए राजपाका सांसदहरु
जनकपुरधाम । नेपालको राष्ट्रिय पोषाक पुरुषहरुका लागि दौरा सुरुवाल हो भने महिला हरुका लागि फरिया र चोलो हो । तर, संसदीय अभ्यसमा खटिनहरुले नै राष्ट्रिय पोषाक लगाउन नपाउने भएपछि मुलुकको शासन सत्ता कसरी चल ...
प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता
काठमाडौं । नेपालको दुई दिने भ्रमणमा रहेकी भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवासँगको भेटेपछि भारतीय विदेशमन्त्री स्वराज ...
के–के भयो दाहाल–स्वराज भेटवार्तामा ?
काठमाडौ‌ । नेपालको दुईदिने भ्रमणमा रहेकी भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्कमल दाहालबीच भेटवार्ता भएको छ । आज बिहान सोल्टी होटलमा भएको भेटमा दुर्इ देशबीचको सम्बन्ध ...
काठमाडौं । निर्वाचनमा झण्डै जमानत जफत भएका नेपाली कांग्रेसका नेताहरू नेतृत्वको आलोचना गरेर सडकमै उत्रिएका छन् । उनीहरूलाई एनजिओले उकासेर कांग्रेस नेतृत्वको विरोध गर्न लगाएका हुन् । भक्तपुर जिल् ...
उम्मेदवारीपछि कार्ड बनाएको खुलेपछि एमाले उम्मेदवारको उम्मेदवारी खारेज
काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्य उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सोमबार प्रकाशन हुँदैछ । निर्वाचन आयोगका अनुसार माघ २४ गते हुने निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरुको नामावली सोमबार सार्वजनिक हुने भएको हो । आयोगले गत ...
अझै बोलाउन सकेनन् १ र ६ नम्वर प्रदेशले अधिवेशन
काठमाडौं । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि पहिलोपटक गठन भएका सातैवटा प्रदेशले प्रदेशसभाका अधिवेशनको तयारी गरिरहेका छन् । निर्वाचन परिणाम प्राप्त भएको २० दिनभित्र अनिवार्य रुपमा अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने ...
फागुनको दोस्रो हप्ताभित्र सरकार गठन हुने प्रचण्डको दाबी
चितवन। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकार गठनभन्दा पहिला पार्टी एकता टुङ्ग्याउने क्रममा आफूहरू रहेको उल्लेख गरेका छन्। प्रेस सेन्टर चितवनले आयोजना गरेको पत्र ...
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको झण्डै दुईसाता लामो बैंकक बसाइको राज अहिले आएर खुलासा भएको छ । भक्तपुरको बालकोटस्थित आलिशान निवासमा घाम तापेर समय बिताउँदै आएका ओलीले एका एक सरकार बनाउने गृ ...
गृहमन्त्री बन्ने महतोको योजना तुहियो
काठमाडौं । एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँगको सम्बन्ध सुधार गरेका राजपा नेपालका नेता राजेन्द्र महतोका योजनाहरू क्रमशः तुहिँदै गएका छन् । सर्लाही स्थायी बसोबास रहेपनि धनुषा जिल्लाबाट प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ...
काठमाडौं । निरंकुश कार्यशैली र व्यक्तिवादी हठका कारण आलोचित बन्दै आएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा) का अध्यक्ष कमल थापाले चाबहिलस्थित राप्रपा (प्रजातान्त्रिक)को सम्पत्तिमाथि आँखा लगाएका छन् । ...
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनको ५६ सिटको लागि आज उम्मेदवारी दर्ता हुँदैछ । २४ माघमा हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि सातवटै प्रदेशका उच्च अदालत रहेका स्थानमा बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ४ बजे ...
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनको ५६ सिटको लागि आज उम्मेदवारी दर्ता हुँदैछ । निर्वाचन आयोगले मंगलबार नै उम्मेदवारी दर्ताको तयारी पूरा भइसकेको जनाइसकेको थियो । २४ माघमा हुने राष्ट्रिय सभा निर्व ...
कांग्रेस र मधेसी गठबन्धनको यसरी भयो सिट बाँडफाँट
काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा कांग्रेस र मधेस केन्द्रित दुई दलबीच तालेमल गर्ने सहमति भएको छ । वाम गठबन्धनसँग सहमति नभएपछि मधेसी गठबन्धनका नेताहरु कांग्रेससँग वार्ता गर्न बालुवाटार पुगेका थि ...
एकतामा भाँजो हाल्दै एमाले, प्रदेश ६ को मुख्यमन्त्री माओवादीलाई नछोड्ने निर्णय
काठमाडौं । नेकपा एमालेको प्रदेश सभा ६ को संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रलाई नछाड्ने निर्णय गरेको छ। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयोजन समितिको बैठकले निर्णय गर्नुअघि नै प्रदेश सभाक ...
प्रदेश ५ को मुख्य मन्त्री बन्दै पोखरेल
नेकपा एमालेल प्रदेश ५ को संसदीय दलको नेतामा शंकर पोखरेललाई चयन गरेको छ । प्रदेश ५ का सदस्यहरुले पोखरेललाई चयन गरेका हुन् । संसदीय दलको नेतामा चुनिएसँगै पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको छ। नेकप ...
ओलीलाई यसरी फकाउँदै छन् भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी
कुमार भण्डारी २०७४ माघ ७ गते
काठमाडौं । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा शुभकामना दिएका छन् । आइतबार अपरान्ह टेलिफोन गरी भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीे एमाले अध्य ...
देउवासँग भिड्दै प्रकाशमान
काठमाडौं । कांग्रेस संसदीय दलको निर्वाचनमा सभापति शेरबहादुर देउवासँग पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह भिड्ने भएका छन् । तर कांग्रेस संसदीय दलको निर्वाचनमा संस्थापन पक्ष नै हाबी हुने देखिएको छ । प्रत्यक् ...